Editorial mey 2015 | FJKM Amboniloha
Editorial mey 2015
MANAMAFY NY FINOANTSIKA NY FANAHY MASINA
Hoy Jesoa : « Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany » (Asa.1, 8)
Tena tia anao tokoa io Andriamanitra io ry mpamaky hajaina. Tsy vitan’ny hoe naniraka an’i Jesoa Zanany hanavotra anao amin’ny Fahotana fotsiny Izy fa mbola nanome ny Fanahiny Masina koa hiasa mahery ao anatinao izay nandray ny Famonjeny tamin’ny Finoana, hitarika anao mba hiasa ka hijoro ho Vavolombelon’ny Fitiavany. Tiany tena hiainanao ny fivavahana Aminy fa tsy ho fombafomba ivelany ihany. Velona Jesoa Kristy Tomponao, te hanjaka eo amin’ny fiainanao andavanandro mihitsy Izy ka haneho ny Voninahiny aminao sy ny tontolo misy anao. Hampiaina anao ao amin’ny Fiainana Mandrakizay feno fahasambarana sy fiadanana feno Izy raha mety ianao. Sokafy àry ny fonao, ampandrosoy ao anatinao Izy. Manoro hevitra anao ny Tompo amin’ity volana ity:
Raiso ny Fanahy Masina ka meteza hanjakany sy hotarihiny amin’izay rehetra ataonao. Fantaro fa ny Fanahy Masina ao anatinao dia
Fanomezana avy amin’Andriamanitra manamarika ny maha zanak’Andriamanitra anao (Rom.8,14);
Andriamanitra mitoetra ao anatinao, mandinika, mahafantatra ny antsipiriham-piainanao. Sady Mahery no Fitiavana Izy ary Fahamarinana koa (1Kor.6,19) ;
Mitarika anao ho amin’ny fahamarinana (Sal.143,10), mampahatsiaro ny Tenin’Andriamanitra, mananatra, mampianatra ny zavatra rehetra(Jao.14,25-26) ;
Mampiaiky ny fahotana (Jao.16,7-11), miteraka indray (Jao.3,5 ) ary misakana ny fandrosoan’ny faharatsiana (2Tes.2,7) ;
Manome fo vaovao ho anao mandeha araka ny lalàn’Andriamanitra sy hitandrina ny fitsipiny ka hanaraka Azy (Ezek.36, 25-27) ;
Mampiteny anao hilaza sy hanao ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny maha olom-boafidy sy mpanompon’Andriamanitra anao ( 2Sam.23,1.7 ; Mar.13,1-11 ; Nom.11,17.25) ;
Mampahery ka mahatonga anao hiasa amin’ny finoana, hikely aina amin’ny fitiavana ary haharitra amin’ ny fanantenana an’i Jesoa Kristy izay Tompon’ny Asa sady mbola hampamoaka izay rehetra nataonao ka ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty (1Tes.1,1-10);
Manome fanomezam-pahasoavana maro samihafa (1Kor.12…);
Mampandresy anao amin’ny ady sarotra atrehinao amin’ny fomba mahagaga, tsy takatry ny sainao. Mampiravoravo anao ao anatin’ny asa fanompoana an’Andriamanitra (Mahomby ve ny Asan’Andriamanitra? Miseho ny Voninahitr’Andriamanitra ? Mifalia ianao satria voasoratra any an-danitra ny anaranao (Lio.10,17.21) ) ;
Mitarika anao hazoto hivavaka, hitahiry tena ao amin’ny Fitiavan’Andriamanitra ary hankahala ny akanjo voapentipetin’ny nofo (Joda 17-22).
Catégories :	Editorial	/ par AnjGab 20 mai 2015